Powerhouse Museum, Powerhouse Museum - Sydney
Australia neOceania Australia Sydney
Inotaura: 500 Harris St, Ultimo NSW 2007, Australia
Telefonhare : +61 2 9217 0111
Website yeIndaneti: www.powerhousemuseum.com
Kushanda maawa: zuva nezuva kubva 10:00 kusvika 17:00
Mari yekushanyira: $ 10, tiketi yevana - $ 5
The Powerhouse Museum ndechimwe chezvikoro zvekare uye zvekudzidzisa zveSydney uye guru rebazi reMasis of Applied Arts & Sciences. Inotanga vashanyi kune zvishandiso nemichina yakagadzirwa mazana emakore akapfuura, pamwe chete nekuvandudzwa kwemazuva ano.
Nhoroondo ye museum
Nhoroondo yePowerhouse Museum yakatanga kare muna 1878. Gwaro rekutanga rakasikwa kubva pane zviratidzo zvakaratidzwa pazviratidzwa zvakasiyana-siyana zveAustralia. Pakutanga musimamende yakanga iri muzinda wekuratidzira, Garden Palace, iyo yakaparadzwa nemoto muna 1882. Mushure mezvo, Powerhouse Museum yakanga iri muzvivako zvakasiyana. Imu Museum yakagamuchira kero yekusingaperi ye500 Harris St chete muna 1982. MunaFebruary 2015, yakazozivikanwa kuti hurumende yehurumende yakasarudza kuitumira iyo kuParramatta.
Zviratidzo zvemu museum
Kusvika iye zvino, nzvimbo yePowerhouse Museum (Sydney) yakaratidzwa 94533 zviratidzo, izvo zvakatanga kuungana muna 1880. Panguva imwecheteyo kukohwa kunogara kuchizadzikiswa. Iyo inonyanya kuratidzwa zviratidzo zvePowerhouse Museum ndeyikuti:
imwe injini inotenderera yakagadzirwa nevashambadzi Bulton uye Watt;
Nyanzvi dzekuumba maitiro 1, yakavakwa naRobert Stevenson muna 1854;
mufananidzo weStrasbourg Clock, yakavakwa naRichard Smith muna 1887;
mienzaniso yeinjini dzemoto yekare uye ndege;
midziyo yekugadzira mari (makemikari, safes, mabhegi, mabhegi ekutakura mari);
kuunganidzwa kwemari yekare kubva kuRoma yekare, China, India uye dzimwe nyika.
The Powerhouse Museum ine zvigaro zvekusingaperi uye zvenguva pfupi. Kusvikira ikozvino, pane zviitiko zvakatsaurirwa kutsvakurudza nzvimbo, zvisikwa zvezvakatipoteredza, digital uye kombiyuta. Zviratidzo zvinotengeswa pamutengo wePowerhouse Museum (Sydney), uyewo inouya kubva kuunganidzwa wega. Iwe unogonawo kupawo ruzivo mukugadzirwa kwechivako ichi chekutsvakurudza. Zvakakwana kuonana nehutungamiri.
Nzira yekuenda seiko?
The Powerhouse Museum iri kumabvazuva kweSydney paHarris Street. Enda kwairi hazvizove zvakaoma, nokuti pedo naro pane bhasi rinomira Harris Street, iro rinogona kusvika pamugwagwa wenzira yeguta 501.
Museum Power Station
Royal Botanic Garden yeSydney
The Mount Annan Botanical Garden
National Park yeBotany Bay
Mavhiki masere ekuberekwa - hapana kuparadza
Badan - kukura uye kutarisira
Peonies: kudyara uye kutarisira
Shangu dzomukati - dzakanakisisa dzevakadzi vaviri pamhenderekedzo
Mabhuku e-Smart akafanirwa kuverenga nokuda kwekuzvidzivirira
Nzira yekuita sei mwana kubva kuchipatara?
Kesha achange akasununguka kana achikumbira ruregerero pachena
Bhochi nehombe dzevhu
Ndezvipi zvinobatanidzwa mubasa retii?
Nzira yekuita chirandi cheprotein?
Tomato tsvuku - yakanaka uye yakaipa
Mifananidzo yakajeka yemifananidzo, ndinoda kuona kaviri
Mutori wenhau Rutina Wesley akangoerekana ataura kusangana naye neshamwari yake Chef Shonda
Camphor mafuta emvere